Cilmi Boodhari - Wikipedia
Cilmi Boodhari(Ahun) wuxuu ahaa nin ku dhashay agagaarka u dhexeeya Hargeysa iyo Berbera, Cilmi Wuxu Cilmi la dhashay nin la odhan jiray dhaameel, islaan haddeertadan nool iyo nin la odhan jiray Ibraahin Jees, oo uu gabayadiisa ku hal-qabsan jiray. Sida ay sheegtay walaashii oo hadda nooli dalka magaalada u camiran waqtigaasi waxa ay ahayd magaalada Berbera, deegaankiisuna wuxu ku dhawaa xagga Berbera, markaa waxa ay ahayd arrin iska daiiciya markaa in uu Berbera shaqo u raadsado. Wuxu shaqo ka helay Roodhiile/Moofo uu lahaa Allaah naxariistiisii janno ha siiyee taajirkii weynaa ee la odhan jiray Xaaji AAdan Rooble Qabille oo moofooyinkii ugu horreeyey geyiga Soomaaliyeed ka aasaasay Berbera, Burco iyo Hargeysaba bilowgii 1901kii. 1930-naadkii ayaa magaalada Berbera waxa caan ka noqday nin dhallinyaro ah oo miyiga ka yimid waa Cilmi Ismaaciil Liibaan oo lagu naanayso cilmi boodhari Goor aroor ah ayaa waxa u timid gabadh aad u qurxoon oo dhallin yar oo rooti inay gadato rabtay--magaceeda waxaa la oran jiray Hodan Cabdulle Walanwal. Gabadha waxaa dhalay nin taajir ah, oo reer magaal ah, oo ingriiska u shaqeeynjiray, tarjumaan ahaa.
Dukaankii roodhida lagu iibiyey ee Berbera ugu weynaa ee Cilmi uu ka shaqeyneyey waxaa soo gashay gabadh qurux badan oo la odhan jirey Hodan Cabdille Walanwal. Sidii ay u socotey waxaa abwaan Soomaaliyeed ee la odhan jiray Maxamed Cumar Huryo Ahun) uu ku sifeeyey sidan:
Markay socodka damacdee!“ Deggenida tallaabada Miisaanka lagu daray Laafyaha la daawado Dadku waxay yiraahdaan: May daarin ciidee Indho deeraleeyey waxay ahay
1 gabaygiisii ugu horeeyay
2 bilawgii dhibaatada jacaylka
3 kulankii labaad ee dhexmaray
4 Qisadii Cilmi Boodhari oo kooban
gabaygiisii ugu horeeyay[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Nimanyahow, dharaar iyo habeen waan dhadhabayaaye,
Dhulkuun baan xarriiqaa siday dhiillo ii timiye,
Sidii qaalin dhugatoobayoo geeli laga dhaabay,
Dhallinyaro ma raacee keligay baan dhaxanta meeraaye,
Dhakhtarkaa la geeyaa qofkii dhaawac weyn qaba e,
Iyana waa igu dheeldheeleyaan dhamacda Daa’uude!
kala dhimaney dhool aadaneey aniyo dhaameele..buu yiri ninkii cilmi.
lafyahagan sidii han gool hiraryada jiinay
bilawgii dhibaatada jacaylka[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Cilmi wuxuu ka faquuqmay bulshaddii uu dhexdeeda magaca iyo maamuuska ku lahaa, wuxuuna noqday nin iska aammusan. Xilligaa geyiga Soomaaliyeed lagama aqoon jecel, waxaana ceeb iyo foolxumo loo arkayey qofkii laga maqlo „Caashaq baa i haya“. Qofkaa caynkaas ah waxaa loo haysan jirey mid uu jiinni derderay. Sidaas darteed ayaa Cilmi loogu qaadey habar jiinniga dadka ka buubisa oo dad badan daaweysey. Kaddib markii laga quustay ayaa waxaa loo tegey wadaaddo. Inkastoo ay aad u dadaaleen, haddana ficilkoodii iyo Quraankoodii ma noqon fal uu Cilmi ku raystay. Nin wed galay looma taag helo
gabaygan waxa uu u tiriyay dadkii isga marka ku hareeraysnaa oo aan jacayl macneheeda garanayn
Caashaqa haween waa horuu Caaddil soo rogaye Sayidkii Carshiga fuulay iyo Caliba soo gaadhye Carruurtay sideen meesha iyo Ciise Nebigiiye Cidla‘ lagama beermeen dadkoo cuudi waaxidahe Waxaa qaarba cayn looga dhigay hays cajebiyeene Soomaalidaa caado xumee iguma caydeene Oo ima canaanteen sidaan Cuudka iibsadaye Kuwii ii calaacalayey baan camal tusalayne Sida weelka caanaha haddii laabta loo culayo Bal aan soo ciddaadee maxaa cunaha dhaafaaya Inanse cadaydo mooye waxaan calalsho lay diidye Cududuhu manaaxaan hadaan caafimaad jidhine Cilmigey wadaaddadu qodheen ceyn kunoqon waaye Markan inaan caddaadaan kabiqi canab daraaddeede
kulankii labaad ee dhexmaray[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Cilmi iyo saaxiibbadiisii waxay ka qayb galeen xafladdii arooska ee ka dhacday Daaroole, waxayna kula kulmeen Hodan.
Kadib markii la wada ciyaarey oo la wada heesey ayay Cilmi suurtogal u noqotay inuu gooni ula sheekeysto Hodan. Wuxuu u sheegey inuu danaynayo inay noqdaan laba qof oo haasawe wadaag ah, maadaama uu iyada aad dooneyo, hablaha oodhanna uu ka calmaday. Hodan waxay ugu jawaabtay in ay la nooshahay islaan eeddadeed ah oo aan marnaba ka aqbalayn nin iyo sheekadiis tooona. Islamarkaasna waxay dhegaha Cilmi si dadban ugu riddey inay jeceshahay in mustaqbalka guurkeedu uu talo ahaan qoyskooda ka go‘o.
Cadceed soo baxday calaacali ma qariso. Boodhari wuxuu yimid gurigii Hodan isagoo u tiriyey gabay uu ku ammaanay quruxdeeda: Naasahan sidii hooto waran horay u soo taagan Dibnahaagan hiifkaba aqoon hadalsan mooyaane Gudub halacsi daymada indhahan hibada loo siiyey Qosol hanaqa soo taabayoo caashaq hurinaaya Ilko aan hogoodii ka lumin kalana hoosaynin Sankaagaa hanaakiyo qorshaha hadiyad loo siiyey Dhabannada hareeraha wacan wejiga halalac nuuraaya Suniyaha habkooda wacan hadal dhamayn waaye Luquntaa habkii geri lahaa hadal wax dhaafsiiyey Timaha hoos garbaha uga degoo sinaha haabhaabtay Heega iyo laafyaha gacmahan hibada loo siiyey Dhexdan aan hareeraha u fidin horayna soo taagmin Hannaan quruxsan waa taa indhuhu ka haqab beeleene! waxa qoray cabdi samad maxamed cabdi raxmaan naleye
Leylo waxey aheyd gabar nin kumehersaneyd laakiin lama doneyn in la shaaciyo arintaa. Marka waxaa la oranjiray ayada umbaa diiday cilmi.
Qisadii Cilmi Boodhari oo kooban[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Dukaankii rootiga lagu gaday ee Berbera ugu weynaa ee Cilmi uu ka shaqeyne yey waxaa soo gashay gabadh qurux badan oo la odhan jirey Hodan Cabdille Walanwal. Sidii ay u socotey waxaa abwaan Soomaaliyeed ku sifeeyey sidan Markay socodka damacdee Deggenida tallaabada Miisaanka lagu daray Laafyaha la daawado Dadku waxay yiraahdaan: “May daarin ciiddee Indho deeraleeyey!“ Gabadhu waxay ku tiri Cilmi „Subaax wanaagsan!“ Isagoo markii horeba ka helay qaab-dhismeedka qurxoon ee uu Eebbe u uumay baa haddana wuxuu ku murqaamay midabkeeda oo aad dahabi moodeysey iyo indheheeda debecsan ee ka soo jeeda wejiga dhalaalaya wuxuu ugu jawaabay „wanaagsan“. Islamarkaasna wuu caashaqay Caashaqii buu u bukay Cilmi Boodhari . „Culays wuu i saaran yahay“ buu ku yidhi saaxiibbadiis. Markuu muddo bil ah jacaylka dhex dabaalanayay waxaa soo batay xanuun ka dhashay rabitaan xad-dhaaf ah oo uu u qabay Hodan. Cuntadii iyo hurdadiina way ku yaraadeen. Intii uu Hodan u tegey ayaa wuxuu u sheegay in uu jecel yahay inuu guursado. Hodanna iyadoo dirifsan, si kulul bay ugu sheegtay Cilmi inaysan guurkiisa u baahnayn. Muddo kaddib Cilmi wuxuu tiriyey gabaygii ugu horreeyey, isagoo ku muujiyey dhibaatadii la soo deristay Nimanyahow, dharaar iyo habeen waan dhadhabayaaye Dhulkuun baan xarriiqaa siday dhiillo ii timiye Sidii qaalin dhugatoobayoo geeli laga dhaabay Dhallinyaro ma raacee keligay baan dhaxanta meeraaye Dhakhtarkaa la geeyaa qofkii dhaawac weyn qaba e Iyana waa igu dheeldheeleyaan dhamacda Daa’uude! Cilmi wuxuu ka faquuqmay bulshaddii uu dhexdeeda magaca iyo maamuuska ku lahaa, wuxuuna noqday nin iska aammusan. Xilligaa geyiga Soomaaliyeed lagama aqoon jecel, waxaana ceeb iyo foolxumo loo arkayey qofkii laga maqlo „Caashaq baa i haya“. Qofkaa caynkaas ah waxaa loo haysan jirey mid uu jiinni derderay. Sidaas darteed ayaa Cilmi loogu qaadey habar jiinniga dadka ka buubisa oo dad badan daaweysey. Kaddib markii laga quustay ayaa waxaa loo tegey wadaaddo. Inkastoo ay aad u dadaaleen, haddana ficilkoodii iyo Quraankoodii ma noqon fal uu Cilmi ku raystay. Nin wed galay looma taag helo! Cilmi Boodhari isagoo aad u xanuunsan ayaa wuxuu tiriyey gabay uu ku eedeeyey dadkii garan waayey caashaqa wuxuu yahay: Caashaqa haween waa horuu Caaddil soo rogaye Sayidkii Carshiga fuulay iyo Caliba soo gaadhye Carruurtay sideen meesha iyo Ciise Nebigiiye Cidla‘ lagama beermeen dadkoo cuudi waaxidahe Waxaa qaarba cayn looga dhigay hays cajebiyeene Soomaalidaa caado xumee iguma caydeene Oo ima canaanteen sidaan Cuudka iibsadaye Kuwii ii calaacalayey baan camal tusalayne…aneh mitaan cml wee iqabsatay [[Category:Suugaant
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Cilmi_Boodhari&oldid=173264"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 20:07, 20 Maarso 2018.